Ortodoksa Mampiaraka ny "ABC ny fankatoavana"
Ortodoksa Mampiaraka ny «ABC ny fankatoavana»
«Ny Amin’y ny fankatoavana» dia iray amin’ireo Ortodoksa fizarana ny Aterineto vavahadin-tserasera «ny Alon ‘ ny finoana», izay fototry ny folo isan-jato ny mpihaino. Inona ny Ortodoksa mila ny fanompoana Mampiaraka, nahoana no tsy ireo toerana ara-tsosialy, izay efa tao amin’ny tambajotra.
Ny avo indrindra dia ny fifandraisana ara-panahy, dia azo atao ihany ny fianakaviana izay mpivady Kristianina hiaina ny fiainana ara-panahy: miezaka ny hiaina ao amin’ny firaisana Amin’andriamanitra sy ny ho tonga tahaka Azy. Faharoa, ny Kristiana amin’ny fiainako ny asa fitoriana mba hametraka ny avo indrindra fahasambarana, maximizing ny hery sy ny talenta nomen ‘ Andriamanitra ny olona. Tsirairay avy dia afaka ny tsy ho nanaiky ny fijangajangana toy ny mpisolo toerana ho an’ny fifandraisana ao anatin’ny fanambadiana.
Ny Ortodoksa fanompoana Mampiaraka misokatra ho an’ireo izay tsy afaka kanefa hiantso ny tenako hoe Kristianina Ortodoksa
Dia mamaritra ny tenantsika ny asa mba hanao ny fanompoana Mampiaraka tsy fijangajangana, ny fivarotan-tena sy ny fanao mamoafady, araka izay azo atao avy amin’ny fakam-panahy izao tontolo izao ity dia ho an’ireo izay mikasa ny toe-panahy araka an’andriamanitra sy tena fitiavana. Raha manome lanja ny tena fitiavana, ny harena ny tso-po, ary ny tena fihetseham-po ao amin’ny fanambadiana, ny ary tsy ny ara-panahy ny zava-poana ny mihelina liana amin’ny fifandraisana, dia ho faly mahita anao eo ny mpandray anjara. Tsarovy zamechatelnye tenin ‘ ny fitiavana ny Apôstôly Paoly: ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay ny, na faminaniana, dia hitsahatra, ary ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, ary ny fahalalana nofoanana.
Izay dia ny momba ny
Fa conjugal ny fitiavana, ny firaisan-kina, nahatratra eto an-tany dia mandehana miaraka amintsika ho any amin ‘ ny mandrakizay
← Ny fivoriana. tanàna Mampiaraka Italia Mampiaraka ny Firaisana ara-nofo ara-Nofo ara-Nofo Dating Free Firaisana ara-nofo amin'ny Chat olon-Dehibe Firaisana ara-nofo Dokam-barotra ara-Nofo Fihaonana, maimaim-Poana ny Vehivavy maimaim-Poana ny olon-Dehibe Firaisana ara-nofo ny Ankizivavy
Izay afaka mihaona amiko ny tovovavy ho an'ny firaisana ara-nofo. Quora →